Uluhlu lweZikolo ze-Ivy League ezineMirhumo yazo yangoku ngo-2022
Uluhlu lweZikolo zeIvy League neMirhumo yazo yangoku
Uluhlu lwezikolo ze-ivy League kuxoxiwe ngalo apha, ezi zikolo zaziwa ngokubanzi njengezinye zezona zibalaseleyo emhlabeni kunye nendlela ezikhuphisana ngayo phakathi kwabafaki-zicelo abafuna ukwamkelwa.
Izikolo ze-Ivy League zithandwa kakhulu, nditsho nezo zingahlaliyo e-US ziyazi ngezi zikolo nokuba kunzima kangakanani ukungena kuzo. Esinye sezikolo sisikolo samaphupha sabafundi abaninzi nokuba ngaba bakwi-undergraduate okanye kwizidanga zokuqala . Ngamaziko adumileyo kwihlabathi kwaye akhuphisana kakhulu ngamazinga aphantsi okwamkelwa kunye neemfuno ezinzima.
Izinga lokwamkelwa kwizikolo ze-Ivy League lelona lisezantsi emhlabeni kwaye abafundi kufuneka badlule kwinkqubo yokhetho engqongqo phambi kokuba bamkelwe. Bamkela kuphela ezona zibalaseleyo kwaye bayabiza ngokulinganayo, ukuba ayibizi kakhulu emhlabeni.
Ezi zikolo ngokudibeneyo zivelise abanye babantu abadumileyo kwihlabathi kubandakanya oomongameli abaninzi baseMelika abanjengoFranklin D. Roosevelt noBarack Obama, abadumileyo, abaphumeleleyo kwiNobel Laureate, oogqirha abaziwayo kunye neenjineli, nabanye abaninzi.
Kungenzeka ukuba ukhe uve ngezikolo ze-Ivy League kwaye ungazi nokuba ithetha ukuthini okanye izikolo ezenza oko. Makhe sijonge ukuba ithetha ukuthini na, izikolo ezikuyo, iimfuno zokungena kwesinye, kunye neendleko eziqhelekileyo zokuya kwisikolo se-Ivy League.
1 Ziziphi izikolo ze-Ivy League
2 Ngubani onokuya kwiSikolo se-Ivy League?
3 I-Avareji yeeNdleko zokuya kwiSikolo se-Ivy League
4 Iimfuno zokungena kwiSikolo se-Ivy League
5 Uluhlu lweZikolo zeIvy League neMirhumo yazo yangoku
5.1 1. KwiYunivesithi yaseHarvard
5.2 2 IYunivesithi yaseYale
5.3 3. University of Columbia
5.4 4 IYunivesithi yaseCornell
5.5 5. IYunivesithi yasePrinceton
5.6 6. IYunivesithi yasePennsylvania (UPenn)
5.7 7. Ikholeji yaseDartmouth
5.8 8 Yunivesithi yaseBrown
Ziziphi izikolo ze-Ivy League
Izikolo ze-Ivy League libinzana elisetyenziselwa ukubhekisa ngokudibeneyo kwezona kholeji zisibhozo zidumileyo nezidumileyo eUnited States. Ezi zikolo zezi;
Ezi zikolo zidityaniswe njengeekholeji ezikumgangatho ophezulu ezinento yokwenza nokugqwesa ezifundweni, ukukhetha ekwamkelweni, kunye ne-elitism yezentlalo.
Ngubani onokuya kwiSikolo se-Ivy League?
Abantu abanokuya kuso nasiphi na isikolo se-Ivy League abafaki zicelo abanakho ukuhlangabezana neemfuno ezinzima zokwamkelwa kunye nokuphumelela iikhrayitheriya zokufaneleka. Ikwasisikolo se-elite.
I-Avareji yeeNdleko zokuya kwiSikolo se-Ivy League
I-avareji yeendleko zokuya kwisikolo se-Ivy League iphakathi kwe-$56,746 kunye ne-$78,417.
Iimfuno zokungena kwiSikolo se-Ivy League
Njengoko benditshilo ngasentla, iimfuno zokwamkelwa kwisikolo se-Ivy League zinzima, inkqubo yokhetho ingqongqo, kwaye nenqanaba lokwamkelwa lisezantsi. Ke ngoko, kuya kufuneka ube nesiphumo esibalaseleyo ukuze uqwalaselwe ukwamkelwa.
Nangona kunjalo, ngezantsi kuluhlu lweemfuno ukuze wazi ukuba unethuba.
Ubuncinci benqaku le-SAT le-1590 okanye le-ACT amanqaku angama-35
Zama ukuba ne-GPA ye-4.0 okanye into esondeleyo kuloo nto kodwa akukho siqinisekiso sokuba uya kwalelwa ukwamkelwa ukuba unento ephantsi.
Zibandakanye kwimisebenzi yasemva kweeyure zesikolo nakwezinye izibophelelo zasemva kokuphuma kwesikolo
Imibhalo yesikolo samabanga aphakamileyo
Kulapho sinika khona iinkcukacha kuzo zonke izintlu ezisi-8 zezikolo ze-Ivy League, iifizi zazo zangoku, kunye namakhonkco afanelekileyo okufunda ngakumbi ngesi sikolo.
1. KwiYunivesithi yaseHarvard
Kuluhlu lwethu lokuqala lwezikolo ze-Ivy League yiYunivesithi yaseHarvard, inqaba yophando yabucala eyasekwa ngo-1636 kwaye iseCambridge, Massachusetts, USA. Lelona ziko lidala liphakamileyo kwaye yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo eUnited States naphakathi kwezikolo kwihlabathi liphela. Liziko elizinikele ekugqweseni ekufundiseni, ekufundeni, nakuphando ukwenza umahluko kwihlabathi.
IYunivesithi yaseHarvard ineKholeji yaseHarvard yezifundo zesidanga sokuqala, izidanga ezili-12 kunye nezikolo zobungcali, kunye neHarvard Radcliffe Institute. Ngokusebenzisa ikholeji kunye nezikolo, ngaphezu kwe-50 yee-majors zesidanga sokuqala, izidanga ezili-134 zesidanga, kunye nezidanga zobungcali ezingama-32 ziyabonelelwa. Imali yokufunda yangoku yi-51,925 yeedola ngonyaka.
2. IYunivesithi yaseYale
IYale yiyunivesithi yophando yabucala edumileyo eseNew Haven, Connecticut, eU.S. Yasekwa ngo-1701 kwaye yiyunivesithi yesithathu endala e-US kwaye lelinye lawona maziko emfundo ephakamileyo ehlabathini. Kuluhlu lwezikolo ze-Ivy League, ibekwe kwindawo "eyona ikhethiweyo" yokwamkelwa kwabafundi besidanga sokuqala ngereyithi yokwamkelwa eyi-4.62%.
Ngaphezulu kwamasebe e-100 kunye neenkqubo kuluhlu olubanzi lwezifundo ezibonelelwayo kubafundi abangena kwisidanga sokuqala kunye nesidanga kunye nesifundo sobungcali. Eminye iminikelo ibandakanya iiseshoni zasehlotyeni, imfundo yehlabathi, ukunikezelwa okungekho isidanga, kunye nokufunda kwi-Intanethi. Imali yokufunda kwiYunivesithi yaseYale yi-55,500 yeedola ngonyaka kodwa malunga ne-50% yomfundi ufumana uhlobo loncedo lwemali.
3. IYunivesithi yaseColumbia
IYunivesithi yaseColumbia yenye yeeyunivesithi ze-ivy league. Liziko lophando labucala lemfundo ephakamileyo elasekwa ngo-1754 kwaye likwisiXeko saseNew York. Yahlulahlulwe yenziwa yiKholeji yaseColumbia, ubuNjineli beColumbia, kunye nezinye izikolo ezili-14 ezibandakanya izikolo zabafundi abagqibeleleyo kunye nezifundo zobungcali. IKholeji yoGqirha kunye noGqirha eyaziwa kwihlabathi liphela iVagelos yenye yeekholeji zayo zemfundo.
Abafundi bamazwe ngamazwe banokufaka isicelo sokwamkelwa kwiYunivesithi yaseColumbia kuyo nayiphi na inkqubo abayithandayo kodwa kufuneka bakhumbule ukuba imfundo iphezulu kakhulu. Uncedo lwemali luyafumaneka kubafundi basekhaya, abafundi bamanye amazwe banokufanelekela ukuba abanye bayahlangabezana nemilinganiselo. Imali yokufunda yangoku yi-61,788 yeedola.
4. IYunivesithi yaseCornell
Kuluhlu lwesine lwezikolo ze-Ivy League yiYunivesithi yaseCornell, yiyunivesithi yabucala yophando ngezibonelelo zomhlaba ese-Ithaca, New York, United States. Njengenye yeekholeji ze-Ivy League, ibisoloko ikwisikhundla esiphakathi kunye neenkqubo zayo ezininzi zikwinqanaba eliphezulu. Ngezi nkqubo, iyunivesiti ibonelela ngemfundo ekhethekileyo kubafundi abangekathweswa izidanga kunye nabafundi abathweswe izidanga kunye nabafundi abaqeqeshiweyo.
Izinga lokwamkelwa kwiYunivesithi yaseCornell yi-10.6%, ukwithuba eliphezulu lokungena kule xa uthelekisa neYale. Ukuba unamanqaku eSAT ali-1550 okanye ubuncinci be-ACT amanqaku angama-34 okanye ngaphezulu nge-3.9 GPA, ke amathuba okuba wamkelwe. Imali yokufunda e-Cornell yi-$57,222 ngonyaka kwaye uncedo lwezemali luyafumaneka kubafundi ababonakalisa imfuno yezemali.
5. IYunivesithi yasePrinceton
Ifumaneka eNew Jersey kwaye yasekwa ngo-1746, iYunivesithi yasePrinceton ikuluhlu lwezikolo ze-Ivy League. Imfundo yabangekabinazidanga kunye nesidanga ibonelelwa kubuntu, ubunjineli, isayensi yendalo, kunye nenzululwazi yezentlalo kubafundi abangaphezu kwama-8,000. Iinkqubo zesidanga sokuqala apha zikhokelela kwiBachelor yoBugcisa (AB) kunye neBachelor yeSayensi kubuNjineli (BSE).
Iinkqubo zabathweswe izidanga kunye nezobuchwephesha zibonelelwa ngezikolo zayo zasemva kwesidanga, ezibonelela ngeedigri kumasebe angama-42 kunye neenkqubo. Izidanga ezidibeneyo zikwakhona. Ngophando kunye nokufundisa okuvela kwezi nkqubo zahlukeneyo, iPrinceton ifundisa abantu abaza kuba negalelo kuluntu kwaye baphuhlise ulwazi oluya kwenza umahluko kwihlabathi liphela. Imali yokufunda $ 52,800.
6. IYunivesithi yasePennsylvania (UPenn)
IYunivesithi yasePennsylvania ifumaneka ePhiladelphia, ePennsylvania, eUnited, kwaye ikuluhlu lwezikolo ze-Ivy League ezasekwa ngo-1740. Abafundi abathweswe izidanga bakaPenn nabo balandela uluhlu olubanzi lweenkqubo zobungcali kwizikolo ezili-90 zabathweswe izidanga.
Ireyithi yokwamkelwa yi-9% kunye nokufunda kwi-Intanethi kunye neenkqubo zasehlotyeni nazo ziyaqhutywa kwaye abafundi bamanye amazwe bamkelekile ukuba bafake izicelo. I-UPenn ibonelela ngamathuba oncedo lwemali kubafundi ngenxa yokuzinikela kwayo ekwenzeni imfundo yayo ekumgangatho wehlabathi ifumaneke kwabona bafundi babalaseleyo nabaqaqambileyo, nokuba ithini na imeko yabo yezemali. Imali yokufunda e-UPenn yi-57,770 yeedola ngonyaka.
7. IKholeji yaseDartmouth
Ikholeji yaseDartmouth ikuluhlu lwezikolo ze-Ivy League, ikwidolophu yasemaphandleni yaseHanover, eNew Hampshire, eUnited States. Yindawo yokufunda edlamkileyo, ebandakanyayo apho abafundi kunye nefakhalthi baphendula ngophando kunye nezinto ezintsha zokusombulula imiba entsonkothileyo yobomi bokwenyani. Abona bafundi bathembisayo bafundiswa apha kwaye balungiselelwe ubomi bonke bokufunda nobunkokeli obunenkathalo ngefakhalthi ezinikele ekufundiseni nasekudalweni kolwazi.
Uluhlu olubanzi lweenkqubo zesidanga sokuqala kunye nesidanga ziyafumaneka ukuze abafundi bakhethe okanye bayile eyabo inkqubo. Ukufundiswa kwezifundo kunye nezinye iindlela zoncedo lwezezimali ziyafumaneka kubafundi basekhaya nakwamanye amazwe abahlangabezana neemfuno. Imali yokufunda yi-57,638 yeedola.
8. IYunivesithi yaseBrown
Kuluhlu lokugqibela lwezikolo ze-Ivy League yiYunivesithi yaseBrown. Yasekwa ngo-1764 njengeziko labucala lophando lwabucala kwaye ibekwe eProvidence, Rhode Island, United States. Ngophando olutsha lokufundisa kunye nophando olwenziwe umhlaba, uBrown unegalelo kuphuhliso lolwazi kuwo onke amabakala okufunda.
Umlinganiselo womfundi kwifakhalthi sisi-7 ukuya kwisi-1, kukho ngaphezu kwama-80 abafundi abangekathweswa isidanga kunye neenkqubo eziyi-84 zabathweswe izidanga ezithatha ukuya kutsho kwiikhosi ezingama-2,477 ukuze abafundi bakhethe kuzo okanye benze eyabo inkqubo. Isatifikethi, esingenasidanga, kunye neenkqubo zesidanga ezimbini nazo zibonelelwe. Kukho nje uluhlu olubanzi lweendlela zomsebenzi onokuthi ukhethe kuzo. Abafundi, nokuba bakwinkqubo yesidanga sokuqala okanye abaphumeleleyo, ababonisa isidingo semali banethuba loncedo lwezezimali.
Umrhumo wokufunda kwiDyunivesithi yaseBrown yi-588,404 yeedola.
Olu luluhlu lwezikolo ze-Ivy League, ezixoxwe ngokupheleleyo, kunye namakhonkco esicelo abonelelwe ukuba ufunde ngakumbi ngeemfuno zeprogram ethile.
Ngaba iStanford ivy league?
IStanford ayikho kuluhlu lwezikolo ze-Ivy League
Nabani na ohlangabezana neemfuno zokwamkelwa kuzo naziphi na izikolo ze-Ivy League angamkelwa ukuba alandele inkqubo azikhethele yona.
Ngaba zikhona izikolo ze-Ivy League eNew York?
IYunivesithi yasePrinceton, iYunivesithi yaseColumbia, iYunivesithi yaseBrown, kunye neYunivesithi yaseDartmouth zikuluhlu lwezikolo ze-Ivy League eNew York.
Ngaba zikhona izikolo ze-Ivy League eIndiya?
Izikolo ze-Ivy League eUnited States azifani nezo zaseIndiya. I-Ivy League yaseIndiya yi-IISc, JNU, kunye neBHU.
Kutheni le nto iStanford ingeyiyo i-Ivy League?
IStanford ayiloziko le-Ivy League ngenxa yokuba ayililo elinye lamalungu. Igama elithi “Ivy League” yiligi yezemidlalo ebandakanya ezi zikolo zisibhozo kwaye iStanford ayisiso esinye sazo kuba njengokuba kwakusenziwa iiligi, iYunivesithi yaseStanford ayizange igqwese kwezemidlalo.
Ngaba zikhona izikolo ze-Ivy League eCanada?
Izikolo zaseCanadian Ivy League yiYunivesithi yaseToronto, iYunivesithi yaseMcGill, iYunivesithi yaseBritish Columbia, kunye neYunivesithi yaseQueens. Ezi yunivesithi zikumgangatho wezikolo ezisibhozo ze-Ivy League e-US.
Ngaba iyunivesithi yasePennsylvania ivy league?
IYunivesithi yasePennsylvania ikuluhlu lwezikolo ze-Ivy League eUnited States.
Ngaba iligi yaseyunivesithi yaseColumbia?
IYunivesithi yaseColumbia yenye yeligi ye-ivy.
Isikolo soShishino saseHarvard kwi-Intanethi | Imirhumo, ukwamkelwa kunye neScholarship
Abaphezulu abali-10 abafumana inkxaso-mali ngokupheleleyo kwiPh.D. Iinkqubo ezinoQhagamshelwano lweSicelo
I-13 iiyunivesithi eziPhezulu ze-MS kwiNzululwazi yeKhompyuter kwihlabathi
uluhlu lwezikolo ze-ivy league
Post Previous:Uyihlisa njani intlawulo yemali mboleko yakho yomfundi
Okulandelayo Post:I-10 esezantsi kwiDyunivesithi yaseIreland imirhumo yaBafundi baMazwe ngaMazwe